အိမ်ဖော် ဆားဗစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အိမ်ဖော် ဆားဗစ်
Posted by etone on May 3, 2013 in Creative Writing, Critic, Society & Lifestyle | 31 comments
လိင်ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုတွေမြင့်မားနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၊ မိန်းတစ်ယောက်အဖြစ် မွေးဖွားလာခဲ့ပါလျှင် ၊ အိမ်မှုကိစ္စ ၊ ဝေယျာဝစ္စအ၀၀နဲ့ အိမ်တွင်းအိမ်ထောင့်တာဝန်ထမ်းရမယ့် ကိစ္စတွေမှာ တာဝန်အရှိဆုံးရယ်လို့အလိုလိုသတ်မှတ်ခံခဲ့ကြရတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း မိန်းမအဖြစ် မွေးဖွားလာသူတွေထဲ အများစုက သိတတ်စ အရွယ်ကစပြီး ၊ အိမ်မှု ကိစ္စတွေကို အသက်အရွယ်အပိုင်းခြား အလိုက်တဆင့်ခြင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ် ။ လူကြီး သူမတွေခိုင်းစေ သင်ကြားလို့သာ လိုက်လုပ်ကြရလို့ ၊ အိမ်မှုကိစ္စမှာ ၀ါသနာပါရင်း သင်ကြားတတ်မြောက်သွားသူတွေ ရှိသလို ၊ ဘယ်လောက်သင်သင် ၀ါသနာရော ၊ စိတ်ဝင်စားမှုပါမရှိတာကြောင့် … အိမ်တွင်းမှု မလုပ်မတတ်တဲ့ မိန်းမတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ … ။ တတ်တာ မတတ်တာ အပထား ၊ အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းမှာ အိမ်ရဲ့ ဝေယျာဝစ္စဆိုတာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရှိနေတတ်တာမျိုးဖြစ်တာကြောင့် အိမ်တွင်းသန့်ရှင်းမှု နဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေကိုတော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ကြရတော့မှာပါ ။
အိမ်ထောင့်တာဝန်တော့ ထမ်းတတ်ပါတယ် .. အခုလိုမလှမပ ပုံနဲ့ ဆို … အိမ်ထောင်ဖက်ကို ကြာကြာထိန်းဖို့ ကွန်ဖီးဒန့်စ်ရှိပါ့မလား … ကဲ .. အမိတို့ … အိမ်ထောင်လည်းထိန်း ..အိမ်ထောင်ဦးစီးကိုလည်း ထိန်းကြပါကုန်
မွေးကတည်းက အိမ်တွင်းမှုမသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ သူတွေက ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ တဲ့သူကလွဲလျှင် အတော်များများက လူကုန်ထံမိသားစုက ပေါက်ဖွားလာသူမျိုးတွေပါ ။ သူတို့အတွက် အိမ်တွင်းမှုကို ကိုယ်တိုင် လုပ်စရာမလိုအောင် ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပေးမယ့်လူ တနည်းအားဖြင့် ပြောရလျှင် အဖိုးခပေးပြီး ခိုင်းစေနိုင်တဲ့ အိမ်အကူ/အိမ်ဖော်တွေ ရှိနေတာကြောင့်ပါပဲ ။ လူကုန်ထံအသိုင်းဝိုင်းတွေအပြင် ၊ ကျန်းမာရေးကြောင့် အိမ်အလုပ်လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ မိန်းမတွေ အတွက်လည်း အိမ်ဖော် / အိမ်အကူဆိုတဲ့ လူတန်းစား လိုအပ်ပါသေးတယ် ။ အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ မိန်းမဆိုလျှင် အိမ်တွင်းမှု နိုင်နင်းရုံ ၊ အိမ်မှာထိန်းသိမ်းနေရုံနဲ့တင် လူအဆင့်မှီပြီလို့ ယူဆလက်ခံထားခဲ့ကြပေမယ့် ဘ၀ရပ်တည်ရေး စိန်ခေါ်မှုနဲ့ အပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အိမ်တွင်းမှုချည်းလုပ်ပြီး ၊ အိမ်မှာနေ အိမ်ထောင်ထိန်းနေရုံမျှနဲ့ အဆင်မပြေတော့ပဲ မိန်းမတွေပါ အပြင်ထွက် စီးပွားရှာအလုပ်လုပ်ကြရတယ် ။ မိန်းမအဖြစ် မွေးဖွားလာလို့ အော်တိုမစ်တစ်အိမ်ထောင်ထိန်းရာထူး ရထားရုံမက ၊ ပိုက်ဆံရှာရမယ့် တာဝန်ပါ ပိလာတဲ့အခါ ၊ အိမ်မှု ကိစ္စတွေ လစ်ဟင်းတာမျိုး ၊ လုပ်ငန်းခွင်သွားဖို့အခက်ခဲ ရှိတာမျိုး … စတဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ် ။ အိမ်မှုကိစ္စ အလျှင်မှီအောင် မလုပ်နိုင်လို့ အခက်ခဲကြုံရသလို မိမိတို့ ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုမှာလည်း ကျဆင်းသွားတတ်တာကြောင့် …. အိမ်ထောင်ဖက်ရှိခဲ့ပါလျှင် အပျော်ရှာသွားတာမျိုး ၊ ပစ်သွားတာမျိုးနဲ့လည်း ကြုံကောင်းကြုံနိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒီလို လူမျိုးတွေအတွက် ၊ အိမ်အကူ / အိမ်ဖော်ဆိုတဲ့ ၊ အခကြေးငွေယူပြီး အိမ်တွင်းမှု လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ လူတန်းစား တစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဟိုးးးးး အရင် ဘိုးတော်ဘုရား လေးဘက်သွားတဲ့ ခေတ်တွေကတည်းကပါ ။ အိမ်ဖော်နဲ့ အိမ်အကူ ၊ အခကြေးငွေယူပြီး အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကိုင်ပေးတာချင်းအတူတူ .. ကွာခြား ချက်ကတော့ ၊ အိမ်အကူတွေက ပုံမှန် အလုပ်ချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ချိန်မှာသာ ဆားဗစ်ပေးပြီး အချိန်တန် အိမ်ပြန်သွားကြတာမျိုးပါ ။ အိမ်ဖော်ဆိုတာကတော့ ၊ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို အိမ်မှာ အမြဲရှိပြီး ၊ လုပ်အားခလည်းပေးရသလို ၊ ထမင်းလည်းကျွေး ၊အ၀တ်စားလည်းဆင်ပေးရရုံမက ၊ သူအတူနေသမျှ ကာလပတ်လုံး သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှူရေး ကိစ္စ အ၀၀ကိုပါ အိမ်ရှင်က တာဝန်ယူပေးထားရသူမျိုးပါ ။ လေ့လာမိသလောက်တော့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အိမ်ဖော်ထားတာ ထက် ၊ အိမ်အကူထားတာ ခေတ်စားကြောင်းလည်း သိခွင့်ရခဲ့ပါသေးတယ် ။ အိမ်ဖော်ပဲ ဖြစ်စေ ၊ အိမ်အကူပဲဖြစ်စေ မိမိတို့ အိမ်ကို အခကြေးငွေယူပြီး အိမ်မှု ကိစ္စလုပ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လာပတ်သတ်ကြမယ့် တစိမ်းတွေချည်းပါပဲ ။ စိတ်အမျိုးမျိုး ၊ စရိုက်အမျိုးမျိုးတွေလည်း ပါနိုင်ပါသေးတယ် ဒီတော့ အိမ်တွင်းအခန်း ၊ နေရာအားလုံးကို ၀င်ထွက် ထိတွေ့ခွင့်ရနေတဲ့ လူမျိုးဖြစ်တာကြောင့် ၊ ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ လူ ၊ အားကိုးရလောက်တဲ့လူ၊ စိတ်ချလောက်ရတဲ့လူ ဖြစ်ဖို့လည်း အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ် ။ ဒါ့ပြင် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ် ၊အဲ့လိုမှမဟုတ်လျှင် သူခိုးဓါးရိုးကမ်းလိုက်မိသလို အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံပြီး စိတ်ညစ်ကြရမှာပါ ။
အိမ်ဖော် / အိမ်အကူ ခေါ်ယူတဲ့နေရာမှာ ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်သူတွေထဲက နွမ်းပါးသူတွေကို ခေါ်ယူခိုင်းစေတာမျိုး ၊ ရပ်ဆွေရပ်မျိုး မကင်းရာမကင်းကြောင်းတွေကို ခေါ်ယူ ခိုင်းစေတာမျိုး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမယ့် … အသိကျွမ်း ၊ ဆွေမျိုး မရှိတဲ့ လူတွေကတော့ ပွဲစားလို့ခေါ်တဲ့ ကြားခံ လူတစ်ယောက် အကူညီနဲ့ အိမ်ဖော် / အိမ်အကူ ခေါ်ကြရပါတော့တယ် ။ ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆားဗစ်ပေးမယ့်လူရှိနေလျှင် ၊ နေ့ည မရွေး အိမ်အလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့ မိန်းမတွေအတွက်တော့ ၊ အိမ်အကူထက် အိမ်ဖော်တွေပဲ လိုအပ်တာကြောင့် ပွဲစားတွေကလည်း အိမ်ဖော်တွေကိုပဲ အဓိကထားပြီးခေါ်ပေးပါတယ် ။ ပွဲခအနေနဲ့ အိမ်ဖော်ရဲ့ တလစာနဲ့ ညီမျှတဲ့ ငွေကြေးကို ပွဲစားလုပ်သူကိုပေးရပြီး ၊ အိမ်ဖော်အတွက် လုပ်အားခကို ခြောက်လစာ တခါတည်း ရှင်းခိုင်းတာမျိုး ၊ သုံးလစာ တခါတည်းရှင်းခိုင်းတာမျိုး လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံ ကြို ယူထားတာမျိုးလည်း ရှိသလို ၊ လုပ်အားခကို အိမ်ရှင်ဆီက တလတခါထုတ်တဲ့ အိမ်ဖော်မျိုးလည်း ရှိတယ် ။ အိမ်ရှင်နဲ့ အိမ်ဖော် အဆင်ပြေနေလျှင် ဒီကိစ္စတွေ ပြသနာမရှိပေမယ့် ၊ အချောင်ခိုစားချင်တဲ့ အိမ်ဖော်နဲ့ ၊ ဖျံကျချင်တဲ့ ပွဲစားတို့ ပေါင်းပြီး အိမ်ရှင်ဆီက ကြိုတင်ငွေယူကာ ၊ သတ်မှတ်ရက်မတိုင်ခင်ကပဲ အလုပ်ပြောင်းရွှေ့တာမျိုး ၊ ထွက်ပြေးကြတာမျိုးတွေလည်း ရှိခဲ့ကြလို့ ၊ အိမ်သားတစ်ယောက်လို စာရိတ္တကောင်းပြီး ၊ ယုံကြည်လို့ ရတဲ့ အိမ်ဖော်မျိုး ဈေးကွက်တောင်းဆိုချက်အရ တကယ်ပဲ လိုအပ်ပါတယ် ။
ယခုဆို သင်တန်းကျောင်းများစွာ ပေါ်လာတဲ့အပြင် ၊ တာဝန်ယူ ဆားဗစ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဒုနဲ့ဒေး ပေါ်ပေါက်လာပါလျှက် … အိမ်ထောင်မှု့ ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး စာရိတ္တပါ အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ အိမ်ဖော်ဆားဗစ်လုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ကိုင်တာတော့ မတွေ့ ရသေးပါဘူး ။ သတိထားမိရသလောက် ယခု တနှစ် ၊ နှစ်နှစ်တွင်းမှာပဲ ၊ ယုံကြည်မှုအတိုင်းတာတစ်ခုယူပြီး ဆားဗစ်ပေးလုပ်နေရတဲ့ ၊ ဘော်ဒီဂတ်လို့ ၊ security ဆားဗစ်လို လုပ်ငန်းတွေတော့ ပေါ်လာတာ တွေ့ရပါတယ် ။ ၀န်ဆောင်ခလည်း သာမန်နှုန်းထက် ဈေးပိုမြင့်သလို ၊ တာဝန်ယူမှု အပိုင်းမှာလည်း အာမခံချက်ရှိလာပါတယ် ။ တာဝန်ချိန်တွင်း တခုခုအပျက်ဆီး အဆုံးရှုံးဖြစ်တဲ့အခါ ၊ ဆားဗစ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်း တည်ထောင်ထားတဲ့ company က အလျှော်စား လုပ်တာမျိုးထိလုပ်ပြီး တာဝန်ယူကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း … အဲ့ဒီလုပ်ငန်း တစတစကြီးထွားလာပြီး အခုဆို ၊ လုပ်ငန်းတူလိုက်လုပ်သူတွေတောင်ရှိနေပါတယ် ။ ဆားဗစ်ချာ့ခ်ျဈေးကြီးပေမယ့် ဆားဗစ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုး၊ တာဝန်ယူအာမခံပေးတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးဆို ၊ လူသုံးများကြပါတယ် ။ အိမ်အလုပ်ဆိုတာကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အလေ့ကျင့်မရှိလျှင် ဘယ်က စပြီး လုပ်ရမှန်းမသိအောင်ပဲ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အလုပ်ပါပဲ ။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ အိမ်ဖော်မျိုးကို လိုအပ်နေကြတာပါ ။
ဘော်ဒီဂတ်တွေ security တွေလို အိမ်ဖော်တွေကိုလည်း စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး ငှားယူလို့ရမယ့် ၊ လုပ်ငန်းမျိုး ၊ company မျိုးလည်း ရှိသင့်ပါတယ် ။ ဒီလို လုပ်ငန်းမျိုး ၊ company မျိုးဖြစ်လာခဲ့လျှင်၊ရှိလာခဲ့လျှင် …အိမ်ရှင်တွေ အတွက်ရော ၊ အိမ်ဖော်အလုပ်လုပ်မယ့် လူတွေအတွက်ရော … အများကြီး အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်စေမှာပါ ။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဌာန လက်အောက်ခံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းထားပါသော်လည်း လေဘာမှတ်ပုံတင်မရှိပဲ အလုပ်သမား ဖြစ်နေကြတဲ့ လူဦးရေက ပိုများပါတယ် ။ ဒီလို လေဘာမှတ်ပုံတင် မရှိတဲ့လူ ၊ လုပ်ရကောင်းမှန်း မသိတဲ့ … လူမျိုးတွေအတွက် …. လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတွေ ၊ မတရားဖိနှိပ် ခိုင်းစေခံရမှုတွေအတွက် အကာကွယ်ပေးဖို့ လက်လှမ်းမှီဖို့ မတတ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒီလိုပါပဲ အိမ်ဖော်က အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းလို့ အိမ်ရှင်တွေဘက်မှာလည်း ပျောက်ဆုံး နစ်နာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ် ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နေရာအမျိုးမျိုးမှာ အလုပ်ခွင်အမျိုးမျိုးမှာ …. အလုပ်သမား ဖြစ်နေရပေမယ့် အလုပ်သမားတစ်ယောက်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့်တွေ လူမသိ သူမသိပျောက်ဆုံးနေရတဲ့ အလုပ်သမား လူတန်းစားတွေထဲ အိမ်ရှင် နှိပ်စက်ခံရတဲ့ အိမ်ဖော်တွေရဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှတာတွေကြောင့် အိမ်ဖော်လုပ်မယ့် အစား နည်းနည်းပါးပါး လူရည်လည်လျှင် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံက စက်ရုံတွေကို ခိုးထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်သူတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာတာပါ ။ ပြည်တွင်းမှာပဲ …. စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးပြီး ၊ အလျှော်စား ကိစ္စထိပါ အာမခံချက်ပေးနိုင်မယ့် သမ္မာအာဇီဝ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအိမ်ဖော်ဆားဗစ်လုပ်ငန်းမျိုး ပေါ်ပေါက်လာလျှင် သိပ်ကောင်းမယ်လို့ပဲ ထင်ြမင်မိပါတော့တယ် ။ ။
အိမ်ဖေါ်ဆားဗစ် ကခေတ်အဆက်ဆက် နီးစပ်ရာလူကိုခေါ်ခိုင်းချင်တဲ့
(နီးစပ်ရာလူထဲမှာ ပွဲစားလဲပါတယ်) ဓလေ့က မပျောက်နိုင်သေးတော့
ဒါကို ၀န်ဆောင်မှုအနေနဲ့ သီးသန့်လုပ်ပေးဖို့ မစဉ်းစားကျတာနေမယ်။
HELP ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာတော့ လူမည်းအမျိုးသမီး အိမ်ဖေါ်တွေရဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ဘ၀တွေကို
လူသိအောင် မှတ်တမ်းတင်ပြီး စာအုပ်ထုတ်ပေးတဲ့ လူဖြူအမျိုးသမီး တယောက်ကြောင့်
ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရသွားကြတာမျိုး မြင်ရတယ်။
အိမ်ဖေါ်မှာလဲ တခြားအလုပ်သမားတွေလို လူတန်းစေ့တဲ့ ခံစားခွင့်မျိုးရှိသင့်တာတော့
အသေအချာဘာဘဲလေ။ ရပိုင်ခွင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိလာဘီဆိုရင် ထိုက်တန်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်ချက်မျိုးလဲ ရှိလာမှာမို့ ကလိန်ကျမဲ့ကိတ်စ ထိန်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်၊ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ကိတ်စလဲ အလိုလိုလျော့ကျသွားမယ်လို့ မြင်မိဘာကြောင်း။
ဂျီးတော်ရဲ့ … လေဘာ မှတ်ပုံတင်က … လေဘာတိုင်း လိုအပ်စ်ဒယ် .. ဘတ်.. ဘီတူမှ ရေးကြီး ခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး .. အလုပ်ရှုပ်ခံ မလုပ်ချင်ဂျလို့ .. မှတ်ပုံတင်လုပ်ထားတဲ့လူ နည်းဒယ်ကွီ … ။ ဒါမှလည်း .. ဂျီးတော်ပြောသလို …
တခြားအလုပ်သမားတွေလို လူတန်းစေ့တဲ့ ခံစားခွင့်မျိုးရှိသင့်တာတော့
အသေအချာဘာဘဲလေ။ ရပိုင်ခွင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိလာဘီဆိုရင် ထိုက်တန်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်သတ်မှတ်ချက်မျိုးလဲ ရှိလာမှာမို့ ကလိန်ကျမဲ့ကိတ်စ ထိန်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်၊ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ကိတ်စလဲ အလိုလိုလျော့ကျသွားမယ်
ဆိုတာမျိုးတွေ …ဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကွီ … ။
စလုံးကို ဗမာမလေးတွေ အလုပ်လာလုပ်တယ်။
တစ်ချို့က အိမ်အကူ အလုပ်မှန်းသိတယ်။
တစ်ချို့က မသိပဲ ရောက်လာတယ်။
ဘွဲ့ရ ပညာတတ်ပေါ့ လေ။ ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုပြီး ဒီ ရောက်မှ ငိုကြ၊ ယိုကြ၊ လျော်ကြ၊ ပြန်ကြ၊ မပြန်နိုင်ရင် ဆက်လုပ်ကြ ဒါမျိုးပေါ့။
(ဘွဲ့ရတဲ့ အထိ ပညာတတ်ပြီးမှ ဘာလို အလိမ်ခံရလည်းတော့မသိဘူးပေါ့။)
ဆက်လုပ်တဲ့ လမ်းကို ရွေးရတယ်ပဲထား။
ကိုယ့်အိမ်မှာတုန်းက လက်ကြောမတင်းခဲ့ဘာဘူးဆိုမှ စ လုံးမ အကြောတင်းတွေ ခိုင်းခံရတာ ဘယ်လုပ်ချင်ပမတုန်း။
မြန်မာမတွေက ရိုကျိုးပါတယ် ခိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့။
ဟုတ်တယ်။ မြန်မာမတွေက အိမ်ဖော်လုပ်ဖို့ မထရိန်းထားဘူးလို့။
ကိုယ်တိုင်လည်း သီတင်းစာထဲမှာ မြန်မာ မိတ်(ဒ) ရတယ်လို့ ဆိုရင် မကြိုက်ချင်ဘူး။
အနှိပ်စက်ခံရတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး။
ဖိလစ်ပင်း က ဒီ အလုပ်အတွက် သီးသန့် ထရိန်းတာကိုး။
ကလေးထိန်း၊ လူကြီးထိန်း၊ သန့်ရှင်းရေး၊ နောက်ဆုံး ကလေးကို စာသင်တာက အစ လက်လွှဲရတာရယ်။
(အဖြူအိမ်ထောင်ဦးစီးကို လည်း ထိန်းနိုင်ကြတယ်။)
သူတို့ကိုတော့ အိမ်ရှင်တွေက လန့်ရတယ်။
တော်တာတတ်တာကိုး။ အိမ်ဖော် ဥပဒေကိုလည်း အရေကျိုသောက်ထားတာရယ်။
အင်ဒိုလည်း ဒီ တိုင်းပဲ။
ဆိုတော့ မလည်မဝယ်နဲ့ သူများအခိုင်းခံထက်စာရင် လည်လည်ဝယ်ဝယ်နဲ့ ပေးတဲ့ ဆားဗစ်က ပိုမကောင်းဘူးလားလို့။
ခုချိန် တူညားကို အိမ်အကူရာထူးပေးရင်တောင် အိမ်ရှင်က ၂ ရက် ၁ပိုင်းနဲ့ ကန်ထုတ်မှာရယ်။
ကျွန်သက်ရှည်အောင် ပြောရလားလို့ ဆဲချင်လည်း ဆဲတော့၊။
မမဆွိပြောတလိုဘာဗြဲ … ဒီမှာက အေးဂျင့်တွေ အလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး .. ရှိသမျှ လယ်လေးရောင်းလို့ .. အလုပ်တွားလုပ်ဒဲ့ လူတွေ ချိတယ် ဟိုရောက်မှ အိမ်ဖော်ဖြစ်နေတော့ .. မလုပ်မဖြစ်လုပ်ကြရဒယ် …ထရိန်းလုပ်မထားတော့ .. အသုံးဆောင်တွေလည်းမသုံးတတ်… အိမ်ရှင်အထာလည်းမနပ်ပဲ … အဆင်မပြေဖြစ် ဖိနှိပ်ခံရ .. ဒါနဲ့ဘဲ … လုံးလည်လိုက်နေတယ် … ။
မမဆွိကိုတော့ … မင်းသားရီးက .. အိမ်အကူရာထူးမပေးပဲ … အိမ်ထောင်ဦးစီးရာထူးပေးထားရက်နဲ့ .. ကန်ထုတ်ခံရမလားကွီ … ။
စမ်းချောင်း မှာရုံးခန်း တစ်ခန်း တွေ့ဖူးတယ်ဗျ . . သင်္ကြန်တွင်းကြီးရောက် ချသွားတာ . . ပိတ်ထားလို့ ပြန်လာရတယ် . . . Professional တွေ ငှား လို့ ရသဗျ . . . . . ဈေးတော့ ကြီးတယ်။
ကိုလု တဂယ်ရီးချိတယ်လားဟင် …..
တကယ် ပါဗျ . . . . စိန် အိတုန် တို့နဲ့ နီးတယ် ထင်ရဲ့ . . .
ဆရာ/ဆရာမ တွေ အကူအညီ နဲ့ 
အင်တာလေး ဘာလေး သွားဗျူးဦးမှပါပဲ
ကိုလုလင်.. ကလေးထိန်းဖို့ ဆိုရင် အလုံဘက်က ကရင်ခြံမှာ ကလေးထိန်း သီးသန့် ခေါ်လို့ ရတယ်။ တလ ကို ၁သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ ၁သိန်း အထက် ပေးရမယ် ထင်တယ်။
ကလေး ထိန်း စပါယ်ရှယ်လစ် ဖြစ်တဲ့ အတွက်.. လိုအပ်တာ လှည့်ကြည့်စရာ မလိုအောင် ကလေး ကိစ္စ ဆို အကုန်လုပ်ပေးကြတယ်။
ကလေးထိန်းခေါ်လို.ရတယ်ဆိုတာလေ ။ လိပ်စာလေးသိရင်ပြောပါလားရှင် ။ တကယ်သိချင်လို.ပါ
အိမ်ဖော်ဆားဗစ်ရှိပါတယ်။ နွယ်ရိုးကုမ်ပဏီပါ။ ပြည်လမ်းမြေနီကုန်းမှာပါ။ ဈေးကတော့ ကြီးတယ်မဆို သာပေမဲ့ သူကဘယ်လောက်ကန်ထရိုက်ပေါ်မှာ လခကိုကြိုပေးထားရပါတယ်။ တနှစ်ချုပ်မယ်ဆို တနှစ်စာ ကြိုပေးထားရပါတယ်။ အိမဖော်ပြေးရင် အစားရှာပေးတယ်ပေါ့။ မလိုချင်တော့ရင်လဲ ကျန်တဲ့လတွက်ပြန် အမ်းတယ်ပေါ့။ သူတို့ကိုတော့ ပွဲခ တလစာပေးရတယ်။ မှာထားရတာ။ အိမ်ဖေါ်လာလျှောက်ရင်သူတို့က မှာထားတဲ့သူကိုဖုန်းဆက်ခေါ်။ အင်တာဗျူး ကြိုက်ရင်ငွေသွင်းခေါ်သွားပေါ့။
နွယ်ရိုးက . . အကုန်ကို လုပ်တာပါလား . . . .။
အစ်မသဲရေ .. နွယ်ရိုးက ပွဲစားလို အလုပ်ရှင်နဲက အလုပ်လုပ်မယ့်လူကို …လူရှာပေးရုံပဲ လုပ်တာထင်နေတာ …
ထရိန်နင်ပါပေးပြီး ၊အပျောက်ဆုံး ရှိလျှင် လျှော်တဲ့အထိတောင် အာမခံချက်မျိုးပေးပြီးပါလုပ်နေတာမျိုးလား … ။
အန်ကယ်ကြီးရေ .. ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်း … အိမ်အကူအလုပ် ၊ အိမ်ဖော်အလုပ်ဆိုတာ လိုအပ်နေတုန်းမှာပဲမို့ .. အခုလိုဆားဗစ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုး လုပ်ချင်ပါတယ် .. (ကျွန်သက်ရှည်အောင်လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် … ) အခြေနေသာ ပေးပြီး လုံလောက်တဲ့ ပိုက်ဆံ လက်ထဲရှိလျှင် လုပ်ချင်ပါတယ် … ။
ဒါပေမယ့်လည်း … လတ်တလောတော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးလေ ..
၁။ အိတုန်ရဲ့ အိမ်ဖော်ဆိုတာက နဂိုကထဲ က ပိုက်ပိုက်မှ မရှိတာ ..ဘယ်က ပိုက်ပိုက် နဲ့ ထရိန်နင်တက်ရမလဲ … ဘယ်သူကလဲ အလကားထရိန်းပေးမှာလဲ ။
၂။ ပွဲစား ဆိုတာ က ရသမျှ အုပ်ဖို့ စဉ်းစားတာ .. အခု မထရိန်းဘဲတောင် လက်မလည်တာ .. ဝေလာဝေးသေး ။
၃။ အိတုန်လိုဘဲ အဲဒီလိုလေး များ လုပ်ရင်ကောင်းကြမယ် စဉ်းစားမိပြီး ပွဲစား တစ်ခါ ပြောမိပါတယ် ။ ခွက်ထိုးခွက်လန်ရီခံလိုက်ရတယ် ။ ကျွန်မက ဘာကို ယုံရမှာမို့ သူ့ကို ထရိန်နင် ပိုက်ဆံစိုက်လုပ်ပေးရမှာလဲတဲ့ ။ ကျွန်မတို့မှာ တစ်ခါတစ်လေမြက်မြက်လေးစားလိုက် ။ အိမ်ဖော်မက အိမ်ရှင်ပစ္စည်း ခိုးပြေးလို့ အိမ်ရှင်က ရဲလက်ထဲ ကျွန်မတို့ကို အပ်လိုက်လို့ ပြန်ကုန်လိုက် နဲ့ လုံးခြာလိုက်နေပါတယ် တဲ့ ။ ကျွန်မလူလဲ ကျွန်မကိုယ်နိုက် မယုံဘူးတဲ့ …
၄။ ခင်ဗျားတို့ ကလည်း အိမ်ရှင်နဲ့ အိမ်ဖော်ကြည်ဖြူနေတာတောင်မှ ဘာလို့ လာလာ ထုတ်လဲ ဆိုတော့ သူ့ အမေ သူ့ကြီးဒေါ်တွေက လည်း ကြိုတင်ငွေလိုခြင် ၊ ကျွန်မတို့လည်း ပွဲခ ရရနေတော့ထုတ်တာပေါ့တဲ့ ။
၅။ မြန်မာပြည်မှာ နေပျော်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ထဲမှာ လူအတော်များများက အိမ်ဖော်နဲ့ နေနိုင်ကြတာလည်း ပါတယ် ။
မင်္ဂလာပါ ကိုထူးဆန်းရေ …
1. ဘော်ဒီဂတ် security company တွေမှာတော့ ….. ထရိန်နင်တက်ဖိုကအတွက် အလုပ်သမားလုပ်မယ့်သူက ငွေရှိဖို့ မလိုပါဘူး .. ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ၊ လက်ကြောတင်းတဲ့ လူမျိုးဆို အလုပ်တခု apply သွားလုပ်လိုက်တာနဲ့ …. company ရဲ့ စီစဉ်မှုအောက်က ၊ ကန့်သွင်းနေစေတဲ့ …ထရိန်နင်သင်တန်းလိုမျိုးတွေ တက်ခွင့်ရမှာပါ ။ စာချုပ်နဲ့အလုပ်သက်တမ်း ကာလ အပိုင်းခြားတော့ ရှိမှာပေါ့နော် … ။ ထရိန်နင်ပေးခြင်းကလည်း company က မြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်တာပါ .. နောက်ပိုင်း ဒီလူတွေကနေ အကျိုးခံစားခွင့် ပြန်ရယူနိုင်အောင်ပါ ။
2. ပွဲစားဆိုတဲ့လူမျိုးထဲ ကြမ်းပိုး လိပ်ဖြစ်အောင် ပြောတတ်တဲ့ လူအတော်များပါတယ် ။ ပွဲစားတွေက ထရိန်နင်ပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ပွဲစားတွေက စိတ်မရှည်တဲ့အပြင် ပွဲဖြစ်ပြီးလျှင်လည်း လှည့်မကြည့်တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့်ရော … လူခေါ်ပေးပေမယ့်… တာဝန်မယူနိုင်တာကြောင့်ရော … တနပ်စားကြံတဲ့ လူများ ပါတယ် ။
3.ကိုထူးဆန်းရေ … အခုအဲ့စိတ်ကူးမျိုးဖြစ်နေမိတာပါ ။ ကိုယ်က တာဝန်ယူထရင်နင်ပေး ၊ အလုပ်ထဲထိထည့်ပေးနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ချင်တာ … ။ လူရွေးချယ်မှုကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် စမ်းစစ်ပြီးမှသာ ထရိန်နင်ပေးသင့်တာပေါ့လေ ။ ဒါပေမယ့် … စိတ်ကူးက … စိတ်ကူးပါပဲ … လက်တွေ့မှာ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုအလုပ်မျိုးဘက် ခြေစုံပစ်ပြီး ဖိဖိစီးစီးလုပ်ဖို့ အချိန်ရှားပါးပြီး ၊ လူတွေအများကြီးကို ခေါ်ထား ကျွေးထား သင်တန်းပေးထားဖို့ ….အလျှော်စားလုပ်ပေးဖို့ အရင်းနှီးမရှိပါဘူး ။
4.ပွဲစားက ရှာပေးတဲ့ လူဆိုလျှင်တော့ အိမ်ရှင်လက်ထဲ ထည့်တာနဲ့ .. တာဝန်ကုန်ပြီလို့ အတော်များများ နားလည် လက်ခံထားကြတယ် … company အနေနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုလျှင်တော့ ၊ ကိုယ့်အလုပ်သမား သူတို့အိမ်ပို့ထားတဲ့အတွက် ၊ အခြေနေကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ် … ။company ဘက်က အလျှော်စားလုပ်ပေးနိုင်အောင် တာဝန်ယူထားခဲ့လျှင်တော့ … စောင့်ကြည့်ခွင့်လည်း ရှိမှာပါ …
5.မြို့ကြီးတွေမှာ … အိမ်ဖော်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ လူအများစုက နယ်ဘက်က လာသူတွေပါ ။ နေဖို့ စားဖို့လည်းရပြီး လခလည်းရတော့ .. အခြေချဖို့ဆို … ဒီအလုပ်ကိုပဲ အများဆုံး လုပ်တတ်ကြတယ် … ။
+++ ကိုထူးဆန်းရေ .. company နဲ့ ပွဲစားနဲ့ ကွာတဲ့ အချက်ကတော့ … ပွဲစားက ပွဲခရပြီး သူ့ကိစ္စပြီးပြီလို့ ယူဆတယ် ၊ အလုပ်သမားရဲ့ တလ လစာ ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် လူပေါ်မူတည်ပြီး ပွဲခရသလို ယူတယ် … အလုပ်သမားရဲ့ အကျင့် စာရိတ္တကိုရော ၊ မတရားခိုင်းစေမှုကိုရော ဂရုမစိုက်တတ်ကြဘူး ။
company သာ ပေါ်လာခဲ့လျှင် … သတ်မှတ်နှုန်းထားနဲ့ အလုပ်သမား ခိုင်းစေနိုင်မယ် ၊ အိမ်ပြန်ထွက်ပြေးတဲ့ ပြသနာမျိုး ၊ ခိုးယူတဲ့ ပြသနာမျိုးကလည်း ကာကွယ်နိုင်မယ် …. စတဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေတော့ ရှိပေမယ့် … အိမ်ဖော် အလုပ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ လစာက ပွဲစားရှာပေးတဲ့ အိမ်ဖော် လစာထက်ပိုချင်ပိုနေပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မျက်နှာလွဲ စိတ်ချရတယ်ဆိုလျှင်ပဲ …. နည်းနည်းပိုပေးရတာ တန်နေမလားပဲ … ။
ခု ကျွန်မတို့ company က security service company က လူတွေ သုံးထားတာ အတော်လေး အဆင်ပြေတယ် … ။
အရင်ကတော့ ကိုယ့် company က ခန့်တဲ့ security တွေကို တစ်ယောက်ချင်း ရွေးချယ်ပြီး ၊ အလုပ်ခန့် သုံးခဲ့တာ … ပြသနာလေးတွေ အနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ် .. ဒါကြောင့် .. တာဝန်ယူပေးနိုင်တဲ့ service company တွေလည်း ပေါ်လာရော … သူတို့ဆီကပဲ ငှားသုံးတာ … အခုဆို အပျောက်ရှ မရှိသလောက်ပါပဲ … ။ ရှိခဲ့လျှင်လည်း အလျှော်စား ပြန်လုပ်ပေးတယ် …. ။ပိုက်ဆံ ပိုပြီး ခြံစည်းရိုးလုံသွားတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ် … ။
အမှန်က ကျနော်လည်း အချိန်ပိုင်းတစ်နေ့ သုံးနာရီလောက် ကိုတစ်ပတ်သုံးရက်စာလောက်
တခုတော့ ရှိတယ် နယ်မှာ လူသွားစုပြီး ခေါ်ထားရမှာဆိုတော့အဲဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွေက
ဒီမှာက ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းတတ်လွန်းလို့ 
အဟီး .. လူတွေခေါ်ထားမယ်ဆို ..လိုင်းကြေးများများဆက်ရပါလိမ့်မယ် …
်formal မကျတဲ့ .. အလုပ်လုပ်သူတွေကိုပြောဒါဘာ … ခိခိ …
(ထန ထန ၀င်ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ … လူရီးမင်းတို့ .. သများဘာမှ မပေါဝူးနော် … အလဂါးနေရင်း ကြောက်တတ်တာ .. နယ်နယ် ကတည်းဂ .. )
အိတုန် အာမခံပေးနိုင်လို့ ကတော့ အားပေးမဲ့ သူတွေ အများကြီးမှ အများကြီး..ပိုပေး ရင်ပိုပေးပါရစေ ..ပွဲစားတွေ နဲ့ မဆက်ဆံ ပါရစေနဲ့တော့ သူတွေလည်း အများကြီး ..
အဲ ခုထိတော့ ပွဲစားတကာ လှည့်သွားနေရ သူတွေလည်း အများကြီး …
မိန်းကလေး အဓိက လည်းဖြစ်တော့ security နဲ့ တော့ မတူဘူးနော် .. security ကုမ္မဏီတွေ ပေါ်လာပြီး maid ဘာလို့ ပေါ်မလာလဲဆိုတာ တွေးချင်စရာ..
အိမ်ဖော် ပြဿနာ တင် မက အိမ်ရှင်ပြဿနာ ကလည်း ရှိသေးတယ် .. ပြောတော့ သာ ဘယ်လိုထားပါ့မယ် .. ဘယ်နှစ်နာရီအထိဘဲခိုင်းပါ့မယ် ပြောတာ .. တကယ်တန်းတော့ မလိုက်နာ .. ဒီကြားထဲ လစ်ရင် လက်တည့်စမ်းချင်ကြတဲ့ ဘိုးတော်တွေ ငတိဆိုးလေးများပါလာရင်လည်း နောက်ပြဿနာ တစ်ခု ..
အဲ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် .. အခု နိုင်ငံခြားသားတွေ များလာရင်တော့ အဲ့ဒါ မြန်မာမိသားစုနဲ့ ဆက်ဆံ ရတာ ထက် ပိုလွယ်မယ် .. သူတို့ က အချိန် နဲ့ ဘဲ ခိုင်းသလို day off လည်း ပေးကြတယ် ။
မြန်မာ တွေက day off ဆို ပေးချင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး ။ ပေးပြန်ရင်လည်း အလွဲသုံးစား လုပ် ဗိုက်ပြဿနာ ပေါ်တတ်ကြတော့ မပေး နဲ့ သံသရာ လည်နေကြတာ .. အဟိ .. နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်ပြန်လှန်ထောင်းသလိုဘဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ..
သူကြီးရဲ့ စံနစ်ကြောင့် မဟုတ်ဆိုတဲ့ အော်သံကြီးကြားနေရဦးမယ် … :harr:
အိမ်ဖေါ် ခေါ်ထားဖူးတာ အကြိမ်မရေတွက်နိုင်အောင်ပဲ..
ခိုးတာ ၀ှက်တာမျိုးတော့ မခံရဖူးပေမဲ့…များသောအားဖြင့်
အိမ်ရှင်နဲ့ အိမ်ဖော်ကြည်ဖြူနေတာတောင်မှ အဒေါ်ကလာပြန်ခေါ်လိုက်
အမေကလာပြန်ခေါ်လိုက်၊ တစ်ခါတလေတော့ အိမ်ခဏပြန်မယ်ဆိုလို့လွှတ်လိုက်တာပြန်ပေါ်မလာလိုက်
ဘယ်တော့မှ နှစ်နဲ့ချီမခံပါဘူး…အခုတော့ မထားတော့ဘူး
မဒမ်မိုက်ပဲ နိုင်သလောက်လုပ်…မနိုင်တာ ကြီးမိုက်ကူပေါ့..
အိုက်ပြသနာ ဒွေပေါ့ .. အူးမိုက်ရေ … အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့..အဖေသေလို့ .. အမေသေလို့.. ဘယ်သူနေမကောင်းလို့စသဖြင့် ပြောပြီး ပြန်ခေါ်သွားတတ်ကြတယ် … လူမှုရေးမို့ ပြန်လွှတ်လိုက်ကြတာ များပါတယ် ..
လွှတ်ပြီး ပြန်မလာတော့ဘူး.. နောက်တအိမ်ပြောင်းသွားရော … ။
မဟာရန်ကုန်မှာ အိမ်အကူဆားဗစ်၊ အိမ်ရွှေ့ပြောင်းဆားဗစ်၊ ပစ္စည်းထုပ်ပိုးဆားဗစ် အဲဒါတွေ ရှိနေပြီလေ မအိတုံရေ။
စကားဆက်ပြီးပြောရရင် ကျွန်တော်လည်း အိမ်အကူဆားဗစ်လုပ်တယ်ဗျ၊ အိမ်ထောင်မကျခင်က အမေရဲ့ အိမ်အလုပ်ဆို ကူခဲ့ရတယ်လေ။ အခုတော့ မဒမ်ရဲ့ အိမ်အလုပ်ကို ကူရတာပေါ့။ ဒါပေသည့် လုပ်အားခတော့ မရဘူး ဘူးဗျ၊ ထမင်းဘဲကျွေးကြတယ်၊ ကိုယ့်ကတောင် ပိုက်ပိုက်သူတို့ကိုပေးရတဲ့ အိမ်အကူပေါ့ဗျာ။
သွက်သွက်လက်လက် အီတုန်းလက်ရာကို မဖတ်ရတာကြာပြီ။
(အိမ်ထောင်လည်းထိန်း ..အိမ်ထောင်ဦးစီးကိုလည်း ထိန်းကြပါကုန်) လို့ ရေးလိုက်တာကို သဘောကျသွားတယ်။
ခုခေတ်မှာ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေလည်း ဟိုးခေတ်ကလို အိမ်တွင်းပုန်း အိမ်အလုပ်နဲ့တင် နပမ်းလုံးနေလို့ မရတော့ဘူး။
အိမ်ထောင်ဦးစီးကို ထိန်းဖို့အတွက် အလှအပအတွက် အချိန်ပေးရတယ်။
လောလောဆယ်တော့…. အိမ်ဖော်ပြဿနာကြောက်လို့ အိမ်မှာ အိမ်ဖော်မရှိဘူး။
အဲဒီတော့မှပဲ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တယ်လို့လည်း ပြောရမယ်။
ဟီးးး အန်တီမမရေ သမီးဒီစာကိုရေးတာကလည်း နည်းနည်းဘုနေလို့ … ညီမဝမ်းကွဲတယောက်မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ယောကျာ်းက စစ်သားမို့ နယ်လိုက်နေရတယ် အိမ်ထောင်လညါး မထိန်းတတ် အိမ်ဖော်လည်းမခိုင်းတက်ပဲ ခု အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါဖြစ်နေတာ တမျိုးလုံးအလှည့်ကျ အိမ်အလုပ်သွားလုပ်ပေးရတယ်လေ … အိမ်ကဘွားတော်လည်း
ခုသူ့အလှည့်မို့နေပူတော်သွား အိမ်အလုပ်လုပ်ပေးနေလေရဲ့ … အိုက်တော့သမီးက တယောက်တည်းကျန်ခဲ့ပြီး ဝေယျာဝစ္စအကုန်လုပ်ရတယ် အဲ့ဒါကြောင့် ခုလိူရေးဖြစ်သွားတာ ခိခိ
ဒေါ်တုံ ရဲ့ ပို့ စ် ကို ဖတ်ပြီး
မန်းတလေး က အကြောင်းလေး နဲနဲ ဝင်ငံဦးမယ်
အိမ်ဖော် ဆိုရင် စိတ်ပျက်စရာနဲ့ တိုးတာများလို့၊ အိမ်ဖော် မငှားတာ ၁၀နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ ။
မန်းတလေး မှာ အိမ်ဖော်ပွဲစားတွေ ရှိပါတယ် ။
ရွာတို့ တောတို့ က ၊ မိန်းခလေး အရွယ်စုံ ဆိုက်စုံ ကို သူရို့ အိမ်မှာ ခေါ်တင်ပြီး ၊ အလုပ်မရမချင်း ကျွေးမွေးထားတယ် ။ လက်တိုလက်တောင်း ခိုင်းရင်လဲ ခိုင်းမှာပေါ့ ။
ငှားမယ့်လူ လာလို့၊ အလုပ်တည့်ရင်တော့ ၊ ၂ဘက်စလုံး ဆီက တစ်လစာစီ သူရို့ ယူတာပ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော် ၊ နောက်ဆုံး အိမ်ဖော်ငှားခဲ့တုန်းက
ပထမ ပွဲစားအိမ်ရောက်တော့ ၊ မိန်းခလေးတွေ အများကြီးပေါ့
ငှားမယ့် ကိုယ့်ကို ပြန်မေးတယ် ။ အိမ်က ဘာအလုပ် လုပ်လဲ .. စားသောက်ဆိုင်လား ဈေးဆိုင်လား ၊ အိမ်မှာ လူဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲ … ဘာညာ
ဒါနဲ့သူ့ မေးခွန်းတွေ ဖြေပြီးလို့၊ လုပ်မှာလား မေးတော့ ၊ တစ်ယောက်ထဲ ဆိုရင် လိုက်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ ၊ သူ့ သူငယ်ချင်းပါ ခေါ်မှ လိုက်နိုင်မယ် တဲ့ ။
ဒုတိယ ပွဲစား ဆီ ရောက်တော့ ၊ ဘာစီးပွားရေး လုပ်လဲ တဲ့
အိမ်က အလုပ်တွေ ကူဖို့ ပဲ ငှားမှာ လို့ ဆိုလိုက်တော့
“ ကျွန်မ တို့ က ၊ အသားကင်ဆိုင် ၊ စားသောက်ဆိုင်မှ လုပ်ချင်တာတဲ့ ”
တတိယ ပွဲစားဆီကြတော့ ၊ တစ်ယောက် ရခဲ့ပါတယ်ဗျာ…
ကိုယ့်မှာ ည အလုပ်ကပြန်လို့မောမောနဲ့ အိပ်မလို့ ရှိသေးပါရဲ့၊ အကိုကြီး ညောင်းရင် နှိပ်ပေးမယ် ဆိုပြီး အခန်းထဲ ဝင်လာလို့ 
ဟီးဟီး….. နေပါစေ ဆိုပြီး ၊ တစ်လစာ ပိုပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ် ။
ခလေးလို လာထိန်းရင်တော့ သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ ။
လူကြီးပါ.ဆိုမှ ထိန်းစရာ မလိုပါဘူး ။
ဥာဏ်ပါပါ ဖြေရှင်းနည်းတွေရယ်….နဲ့ …
အိမ်ထောင်ရှင်မကြီးရဲ့မျက်နှာတော်.. မညိုအောင်..နေမှာပေါ့ကွယ်….။
(မှတ်ချက်.. ။ ။ အလက်ဆင်း သည် လူပျိုစစ်စစ် ဖြစ်သည် ။)
မရှိလည်းလည်းခက် ရှိလည်းခက် ဆိုတာ အိမ်ဖေါ်တွေပဲအိတုံးရေ..
အိမ်မှာအကူကမှရှိ ကိုယ်ပဲ အလုပ်ထွက်ရတော့မလို့
အိတုန် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး အချိန်ပိုင်းဆာ ဗစ်လုပ်ပေါ့. ကောင်မလေးတွေ စုထား ကားတစ်စီးနဲံ့သူတို့သွား အလုပ်လုပ် မဲ့ အိမ်တွေကို မနက်ပိုင်း လိုက်ပို့ညနေပိုင်းပြန်ကြို ရုံးချိန်လိုပေါ့. တချို့ အိမ်တွေက အိမ် အကူလို ချင်ပေမဲ့ အိမ်မှာအချိ်န်ပြည့်မထားချင်ကြဘူး။ အချိန်ပိုင်းပေါ့. မြန်မာ ပြည်က အိမ်ဖော် တွေ အလုပ်က မလွယ်လှ ဘူး ကလေးထိန်းသန့် ရှင်းရေး ထမင်းချက် အကုန်ရောလုပ်၇တာနော်. ဘေဘီစစ်တာ က အိမ်ဖော်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်. ဒီမှာ
ကရော ချနေတယ်. ဒါနဲ့ စကားမစပ် မြန်မာ ရုပ်ရှင်ိကားတွေ မှာ တပည့် တပန်းတွေ အိမ်ဖော်တွေ သိပ်ပေါတာနော်. ဆက်ဆံတာက လညိး သခင်နဲ့ကျွန် ကြနေတာပဲ.း)